एनटिसी मोबाइलबाट एनटिसीमा पैसा कसरी पठाउने? - बैदेशिक पोष्ट
एनटिसी मोबाइलबाट एनटिसीमा पैसा कसरी पठाउने?
in आर्थिक, सूचना प्रबिधि
माघ ८, २०७८ १५;५१ मध्यान्ह प्रकाशित
एनटिसीको एउटा प्रिपेड सिमबाट अर्को सिममा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अर्थात् एउटा सिममा भएको पैसा अर्को सिममा सजिलै हाल्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ आपत्कालिन अवस्थामा, जस्तै रिचार्ज कार्ड नपाइने ठाउँमा पुग्नुभयो अथवा वाइफाई/डेटाबाट मोबाइल बैंकिङ पनि नचल्ने अवस्था आइपर्‍यो भने आफ्नो नजिकको मान्छेलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिदिन भन्न सक्नुहुन्छ।
यसको लागि विशेष दुई तरिका छन्। पहिलो, युएसएसडीमार्फत। र दोस्रो, एनटिसीको मोबाइल एपमार्फत्। तीमध्ये युएसएसडीमार्फत कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने?
युएसएसडीलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा टेलिकमले ग्राहकलाई नयाँ सिम लिएको समय दिने एउटा निश्चित नम्बर हो। यो तरिकाबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सुरूमा तपाईंलाई आफ्नो फोनको सेक्युरिटी कोड चाहिन्छ। अर्थात् जुन सिमबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सिमको सेक्युरिटी कोड।
यदि तपाईंलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको सिमको सेक्युरिटी कोड याद छैन भने उक्त सिमको मेसेज बक्समा गएर ‘scode’ लेखेर १४१५ मा मेसेज पठाइदिनुस्। यसरी तपाईंले मेसेजमार्फत नै तपाईंको सिमको कोड प्राप्त गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कोड १२३४५६७८ हो।
योसँगै मानौं तपाईंले ९८४३१२३४५६ नम्बरबाट ९८४१०००००००० नम्बरमा १५० रुपैयाँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ।
अब यसरी गर्नुहोस् ब्यालेन्स ट्रान्सफरः
– १४१५ बाट प्राप्त गर्नुभएको सेक्युरिटी कोड टिपेर राख्नुहोस्
– मोबाइलबाट ‘फोन’ मा जानुस्, जहाँबाट तपाईंले कल गर्नुहुन्छ
– त्यहाँ *४२२*१२३४५६७८*९८४१००००००००*१५०# गरेर कल डायल गर्नुहोस्
यसपछि तपाईंले आफ्नो ९८४३१२३४५६ नम्बरबाट ९८४१०००००००० नम्बरमा १५० रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको जानकारी गराउँदै एसएमएस प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब जुनकुनै समय तपाईंले एउटा प्रिपेड सिमबाट अर्को प्रिपेड सिममा यसरी सजिलै ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्‍छ।
नेपालको टेलिकम सर्भिस प्रोभाइडरमध्ये एनटिसी पनि निकै रुचाइएको छ। एनटिसीले ग्राहकहरूको लागि वभिन्न समय विभिन्न प्याक र योजनाहरू सार्वजनिक गर्दैछ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रूपैयाँले बढ्यो
फाल्गुन १९, २०७८ २१;३८ मध्यान्ह प्रकाशित
एक लाख नजिक पुग्यो सुनको मूल्य
फाल्गुन १९, २०७८ १४;०९ मध्यान्ह प्रकाशित
विदेश बाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ ? आजको विनिमयदर : कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
फाल्गुन १९, २०७८ ०९;२८ बिहान प्रकाशित
नेपालीको भान्सामा रुस–युक्रेन युद्धको असर, संकटमा पर्दैछन् तेल उद्योग
फाल्गुन १९, २०७८ ०८;०९ बिहान प्रकाशित
स्वदेशमा रेमिट्यान्सको सीमा घट्यो, प्रतिदिन २५ हजार मात्र पठाउन पाइने
फाल्गुन १८, २०७८ २१;१९ मध्यान्ह प्रकाशित
अर्कैकी गर्लफ्रेण्ड भेट्न युवतीको घरमै गएका युवकले ३ तला माथिबाट हाम्फाले
चैत्र ६, २०७८ ११;४२ बिहान प्रकाशित
नेपाल बैंकमा ठूलो संख्यामा जागिर खुल्यो
फाल्गुन २०, २०७८ १२;२० मध्यान्ह प्रकाशित
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्याे
फाल्गुन १९, २०७८ १४;३७ मध्यान्ह प्रकाशित
भिजिट भिसामा विदेश जान दश लाख आम्दानी र पाँच लाख बचत अनिवार्य
फाल्गुन १९, २०७८ ०९;३४ बिहान प्रकाशित